၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ မောင်းသူမဲ့ ကုန်တင် သင်္ဘောကို အပြီးတည်ဆောက်မယ့် Rolls-Royce – Myanmar Mobile App
Posted on December 26, 2018 December 26, 2018 Author Ko Nyi	Comment(0)
မောင်းသူမဲ့ကားများ ခေတ်စားနေချိန်မှာ Rolls-Royce က အများနဲ့ကွဲထွက်ပြီး မောင်းသူမဲ့ သင်္ဘောကို ဖန်တီးနေတဲ့ သတင်းများ ပြီးခဲ့တဲ့လများ အတွင်းက ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဟာ ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ မောင်းသူမဲ့ ကုန်တင် သင်္ဘောကို အပြီး ဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ အခုတော့ မောင်းသူမဲ့ နည်းပညာ ပါတဲ့သူ့ရဲ့ သင်္ဘောကို ပင်လယ်ပြင်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ် အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်ပြလိုက်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ မောင်းသူမဲ့ သင်္ဘော အမည်ဟာ Falco ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းသူမဲ့ သင်္ဘောဟာ အလိုအလျှောက် မောင်းနှင်နိုင်သလို အဝေးကနေ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်္ဘောရဲ့ အရှည်ဟာ ၅၃.၈ မီတာ ရှိပါတယ်။ ဖင်လန်မှ Finferries နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးဒီစမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့ Turku မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Parainen ကနေ Nauvo ကို အသွားအပြန် စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့တာပါ။ အသွားမှာ Falco ဟာ လူများရဲ့ အကူအညီ မလိုဘဲ အလိုအလျှောက် မောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်။ အပြန်ခရီးမှာတော့ တီထွင်သူများက သင်္ဘောကို အဝေးကနေလည်း ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အော်ပရေတာတစ်ဦးက မိုင် ၃၀ အကွာကနေ သင်္ဘောကို ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောဟာ ကမ်းခွာ၊ ကမ်းကပ် ခြင်းများကိုလည်း အလိုအလျှောက် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ Rolls-Royce ရဲ့ Ship Intelligence နည်းပညာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ သင်္ဘော ပတ်လည်မှာ ကင်မရာနဲ့ ဆန်ဆာများစွာ ထည့်သွင်းထားပြီး မောင်းသူမဲ့ ကားများလိုပဲ သူဟာ အခြား ယာဉ်များနဲ့ အတားအဆီးများကို ရှောင်ကွင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီရဲ့ မောင်းသူမဲ့ သင်္ဘောဌာနမှ အကြီးအကဲ ဖြစ်သူ Mikael Makinen က “ အနာဂတ်မှာမောင်းသူမဲ့ သင်္ဘောတွေ တကယ် ထွက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းသူမဲ့ သင်္ဘော နည်းပညာရဲ့ ခြေလှမ်းအသစ်တစ်ခုကို ဒီစမ်းသပ်မှုက တွန်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ “ လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၂၅ ခုနှဈမှာ မောငျးသူမဲ့ ကုနျတငျ သင်ျဘောကို အပွီးတညျဆောကျမယျ့ Rolls-Royce
မောငျးသူမဲ့ကားမြား ခတျေစားနခြေိနျမှာ Rolls-Royce က အမြားနဲ့ကှဲထှကျပွီး မောငျးသူမဲ့ သင်ျဘောကို ဖနျတီးနတေဲ့ သတငျးမြား ပွီးခဲ့တဲ့လမြား အတှငျးက ကွားသိခဲ့ရပါတယျ။ ကုမ်ပဏီဟာ ၂၀၂၅ ခုနှဈမှာ မောငျးသူမဲ့ ကုနျတငျ သင်ျဘောကို အပွီး ဖနျတီးဖို့ရညျရှယျထားပါတယျ။ အခုတော့ မောငျးသူမဲ့ နညျးပညာ ပါတဲ့သူ့ရဲ့ သင်ျဘောကို ပငျလယျပွငျမှာ ပထမဆုံး အကွိမျ အောငျမွငျစှာ စမျးသပျပွလိုကျပါတယျ။
သူ့ရဲ့ မောငျးသူမဲ့ သင်ျဘော အမညျဟာ Falco ဖွဈပါတယျ။ မောငျးသူမဲ့ သင်ျဘောဟာ အလိုအလြှောကျ မောငျးနှငျနိုငျသလို အဝေးကနေ ထိနျးခြုပျနိုငျပါတယျ။ သင်ျဘောရဲ့ အရှညျဟာ ၅၃.၈ မီတာ ရှိပါတယျ။ ဖငျလနျမှ Finferries နဲ့ ပူးပေါငျးပွီးဒီစမျးသပျမှုကို ပွုလုပျတာ ဖွဈပါတယျ။ ဖငျလနျနိုငျငံရဲ့ Turku မှာ ပွုလုပျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Parainen ကနေ Nauvo ကို အသှားအပွနျ စမျးသပျမောငျးနှငျခဲ့တာပါ။ အသှားမှာ Falco ဟာ လူမြားရဲ့ အကူအညီ မလိုဘဲ အလိုအလြှောကျ မောငျးနှငျခဲ့ပါတယျ။ အပွနျခရီးမှာတော့ တီထှငျသူမြားက သင်ျဘောကို အဝေးကနလေညျး ထိနျးခြုပျနိုငျတယျဆိုတာကို ပွသခဲ့ပါတယျ။ အျောပရတောတဈဦးက မိုငျ ၃၀ အကှာကနေ သင်ျဘောကို ထိနျးခြုပျမောငျးနှငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
သင်ျဘောဟာ ကမျးခှာ၊ ကမျးကပျ ခွငျးမြားကိုလညျး အလိုအလြှောကျ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ သူ့မှာ Rolls-Royce ရဲ့ Ship Intelligence နညျးပညာ ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ သင်ျဘော ပတျလညျမှာ ကငျမရာနဲ့ ဆနျဆာမြားစှာ ထညျ့သှငျးထားပွီး မောငျးသူမဲ့ ကားမြားလိုပဲ သူဟာ အခွား ယာဉျမြားနဲ့ အတားအဆီးမြားကို ရှောငျကှငျးသှားနိုငျပါတယျ။
ကုမ်ပဏီရဲ့ မောငျးသူမဲ့ သင်ျဘောဌာနမှ အကွီးအကဲ ဖွဈသူ Mikael Makinen က “ အနာဂတျမှာမောငျးသူမဲ့ သင်ျဘောတှေ တကယျ ထှကျလာတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ မောငျးသူမဲ့ သင်ျဘော နညျးပညာရဲ့ ခွလှေမျးအသဈတဈခုကို ဒီစမျးသပျမှုက တှနျးပို့ပေးလိုကျပါတယျ။ “ လို့ ပွောပါတယျ။
Zawgyi Version ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်း Android version အသစ်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် သူနဲ့ကိုက်အောင် hardware တွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။ Android P ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ Google နဲ့ ပါတနာဖွဲ့ထားတဲ့ Qualcomm ကတော့ upgrade လုပ်ဖို့ ပြောနေစရာကိုမလိုတော့ပါဘူး။ Snapdragon 845 ၊ 660 နဲ့ 636 chipset တွေကို Android P launch အတွက် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါတနာတွေဖြစ်ထားတာမို့ Qualcomm ဟာ Android P ကို စောစီးစွာ အသုံးပြုခွင့်ရထားပြီးတော့ Android version အသစ်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို နားလည်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ “Google နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Android P အတွက် လုပ်ဆောင်ရတာကို […]
Zawgyi Version OnePlus6launch event ကတော့ ငါးရက်လောက်သာ လိုပါတော့တယ်။ ဒီတော့ သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ပြနေပါတယ်။ သောကြာနေ့တုန်းက Twitter ပေါ်မှာ OnePlus6ကင်မရာက iPhone X ၊ Galaxy S9 နဲ့ Google Pixel2တို့ရဲ့ စံညွှန်းတွေနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့စာလေးကို တင်ထားခဲ့ပါတယ်။ The #OnePlus6 Dual Camera takes on the iPhone X, Samsung Galaxy S9, and Google Pixel 2. Can you match the shot to the phone? […]
ပြောင်းလဲမှုတွေအကြောင်း ချပြလိုက်တဲ့ iPad mini5Cover ရဲ့ ပုံရိပ်လေး